သင်ချေးငွေယူသည့်အခါကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
စာချုပ်သည်အနည်းငယ်သာ bukovku ဖတ်ရှုဖို့သေချာ။ ဘဏ်မဟုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအချိန်လေးအတူ Check နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲအခြေအနေအကြောင်းမေးမြန်းဖို့သေချာပါစေ။ ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးအပေါင်းတို့၏, သင်သည်သင်၏ငွေကြေးဆိုင်ရာစွမ်းရည် calculate ကိုအလွန်ဂရုတစိုက်ချေးငွေထုတ်ယူမီ။ ဘယ်လောက်ငွေအရံနှင့်သူ၏ခြေထောက်ပေါ်ခိုင်မြဲစွာရပ်တည်လျှင်။ အင်အားစု majeure အခြေအနေများကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲရှိပါတယ်
The-ပထမဦးဆုံးသင်ချေးငွေယူအတိအကျဘာ% အောက်မှာသိရန်ရှိသည်, ဘဏ်ကိုသင်နှင့်သင်၏ချေးငွေပြန်ဆပ်၏အချိန်ဇယားကိုသငျသညျပေးဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်စဉ်အတွင်း, သင်ငွေပေးချေ၏ဒါမှမဟုတ်ဇယားရဲ့အဆုံးမှာပမာဏဖြစ်သင့်သောအရာကိုကိုသင်မြင်ရပါလိမ့်မည်, တစ်ဦးကိုလစဉ်အခြေခံပေါ်မှာချေးငွေပြန်ဆပ်သင့်တယ်ရေတွက်ကျွန်တော်မြင်ရပါလိမ့်မည်သည့်အရာကနေ အတိအကျဘယ်လောက်ဘဏ်ချေးငွေနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အကျိုးစီးပွားပမာဏကိုတယောက်တည်းဆပ်ဖို့။
တတိယအချက်ဘဏ်ငွေရှင်းကောင်တာတွင်မှာငွေသားအောင်ဘို့% ယူ, ငါ terminal ကိုမှတဆင့်ချေးငွေပေးဆပ်နိုင်မလား, ချေးငွေပေးဆောင်မည်သို့စစ်ဆေးပါ။
ဂရုတစိုက်ကြောင့်ဒဏ်ငွေပုံနှိပ် osoenno, လက်မှတ်ထိုးရန်သင့်အားပေးတော်မူသမျှသောဘဏ်စာရွက်စာတမ်းများ, ဖတ်ပါ။
ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ကွဲပြားခြားနားသောပရိယာယ်၏တစ်ဖွဲ့လုံးစည်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာသင်ဂရုတစိုက်အပေါငျးတို့သစာတမ်းများ (အထူးသဖြင့်ဒဏ်ငွေပုံနှိပ်) ကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို, ဘဏ်များတစ်ရာခိုင်နှုန်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသို့သော်ဤသာချေးငွေသူ့ဟာသူအဘို့ဖြစ်၏။ အကျိုးစီးပွား၏စုစုပေါင်းငွေပမာဏကိုများသောအားဖြင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါဟာပူဇော်ကြသည်သောအခြေအနေများမှာကိုလည်းရှာဖွေနေရကျိုးနပ်သည်။ ဘယ်လောက်သင် (တကယ်တော့လွန်း, အဘယ်သူမျှမဒီကနေကိုယ်ခံစွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်) ကိုနှောင့်နှေးများအတွက်ပယ်ဆုတ်ဖဲ့မည်။ သငျသညျ sign အပေါငျးတို့သစာတမ်းများမီ, သငျသညျအလွန်ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါနှင့်နားလည်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် esch ထပ်။ အဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောဘာမှမရှိဘူးကွဒါကြောင့်ဘဏ်တွေလိုပဲတစ်စာချုပ်တက်ဆွဲပါ။ တစ်ခုခုစောင့်များနှင့် ပတ်သက်. ရှင်းလင်းတင်ပြမှုကိုထပ်မမေးပါ။ ချေးငွေပမာဏကိုအတော်လေးကြီးမားသည်အထူးသဖြင့်ပါ။ သို့သော်ပြီးသားစက်ပေါ်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာရှုထောင့်စတာတွေ, ငွေကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ, အာမခံလိုအပ်လိုအပ်သောရှိမရှိ, အာမခံခြင်းရှိမရှိနှင့်မည်မျှကိုမေးရမယ် ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှအကျဉ်းခုနှစ်တွင်ဘောင်းဘီမပါဘဲနိုင်ပါတယ်ကွဲပြားခြားနားအပြည့်အဝပြင်ဆင်ချဉ်းကပ်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
ဂရုတစိုက်ချေးငွေအခြေအနေများဖတ်ရှုဖို့, သူတို့လိမ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်, အကျိုးစီးပွားအကောင့်ပေါ်မှာတို့တွင်အရှင်သခင်အရာပြီးအောင်ရှိမရှိအကျိုးစီးပွားအပေါ်ကိုမေးပါသို့မဟုတ်ချေးငွေမြင့်တက်အကျိုးစီးပွားဟူသောဝေါဟာရကို, ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုဆွေးနွေး, ပြီးတော့တစ်ဦးတည်းယူခဲ့ကြသည်ကဲ့သို့တူညီသောတည်နေကြလိမ့်မည်မပြုခဲ့အရေးအပါဆုံး ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နောက်လကိုတိုးမြှင့်မည်, အချို့သောဘဏ်များ (ဝှက်ထား) vnutrinney စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိအတိုးနှုန်းအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကပေးဆောင်သို့မဟုတ်မနိုင်ကိုသိရန်လိုအပ်ပါ, ဤပိုက်ဆံများအတွက်ဝယ်လိုအားအဖြစ်, ပြီးတော့သင်ချေးငွေသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးရန်ဘဏ်ပေးသောစာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ရှုဖို့လိုပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာ။ သင်အချိန်ပေါ်တွင်ပိုက်ဆံယူ, မိမိတို့နှင့်အလုံးစုံတို့အဘို့ပေးရ!
အဘယ်အရာကို Bershov အခြားလူများရဲ့ပိုက်ဆံနှင့်သင် (အမြောက်အမြားရှိမှတပါး) သူမ၏ကြလော့
Esze ချေးငွေ၏ညျသငျ့လျြောအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ကောင်းသောလိမ့်မည်။ အနှောင်သို့တက်ဖို့ထက်, အချို့ပိုက်ဆံတက်ကယ်ဖို့မကြာခဏပိုမိုလွယ်ကူ;
ဒါဟာအကြွေးသဘောတူညီချက်များ Quote မကြာခဏဖြစ်ကြောင်းကိုအောက်မေ့ရမည်, ရေအောက် kamniquot; ဂရုတစိုက်သူတို့ကိုလေ့လာ (အထူးသဖြင့်အသေးစားပုံနှိပ်အတွက်စာသားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်) ။ ကံကောင်းပါစေ!
အကျိုးခံစားခွင့်, Quote ရှိပါတယ်ရှိမရှိ; vstrechuquot လိုက်ပြီး;, အရေးပေါ်သင်၏အသက်တာတွင်ဖြစ်ပျက်လျှင်, etc လာမည့်ငွေပေးချေ၏အကျိုးစီးပွား-အခမဲ့ချုပ်၏ပုံစံအတွက်တစ်ခုခု
နှောင့်နှေးငွေပေးချေ၏အမှု၌ခြိမ်းခြောက်သောဘယ်လောက် overpay မှရပါလိမ့်မယ်
ကြောင်း Quote စာလုံးပေါင်း; strokquot အကြား; အငယ်ပုံနှိပ်
22 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,443 စက္ကန့်ကျော် Generate ။